XOG: Axmed Karaash oo maanta la kulmaya Guddiga Nabadgalyadda ee G. Barri & Jeneraalka ay is qabteen oo kulanka jooga. – Puntlandtimes
XOG: Axmed Karaash oo maanta la kulmaya Guddiga Nabadgalyadda ee G. Barri & Jeneraalka ay is qabteen oo kulanka jooga.
June 10, 2019 W LAASCAANO
BOOSAASO(P-TIMES)- Madaxweyne kuxigeenka Puntland ahna Kusimaha Madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta shir gudoominaya kulanka guddiga Amniga ee gobalka Barri iyo wasiiro katirsan dawladda oo horey u joogay magaalada Boosaaso, waxaana kulankaas looga wada hadlayaa xaaladdaha ammaanka ee gobalka.
Madaxweyne kuxigeenka oo ku yimi Boosaaso safar aan horey loo shaacin, ayaa wararku sheegayaan in ujeedada safarkiisa ay salka ku hayso arrimaha waa weyn ee dhanka Ammaanka, oo ay Xukuumaddu walaac ka qabto xaaladda ammaanka.
Mr, Karaash kulanka uu shir gudoominayo waxaa kasoo qeybgalaya Taliyaha ciidamada Booliska Puntland Jen, Muxuyadiin Axmed Muuse oo ay maalin kahor isku fahmi waayeen wada hadalo dhanka telfoonka ah, ka dib markii ay isku qabteen taliyaha Booliska gobalka Nugaal oo uu shaqada ka joojiyey Taliye Muxuyadiin.
Xukuumadda Puntland, caqabadaha ugu waa weyn ee ay dhaxashay waxaa kamid ahaa ammaan xumida magaalada Boosaaso oo aan kasoo reynin, waxaana ilaa hadda socda dilal qorsheysan kuwaas oo aan waxba xal ah loo helin.
Taliyaha ciidamada Booliska Puntland wuxuu meel fagaare ah ka sheegay maalinkii Ciidda in ganacsato iyo dadbadan oo ku nool Boosaaso ay la shaqeeyaan kuwa ka dambeeya falalka ammaan darro, oo aysan waxba la shaqeyn ah la yeelan ciidamadda Ammaanka.
Dawladda Puntland, dhaliilo badan ayaa ka soo wajahaya bulshada gobalka Barri, waxaana Madaxweyne Deni ay ka mid ahayd magaalada Boosaaso meelaha uu ku galay loolankii doorashada in uu ka dhigayo meel ammaan ah.
Ciidamadda ugu badan Puntland ee dhanka la dagaalanka Argagixisada ayaa kusugan magaalada Boosaaso, waxaana lagu tiriyaa in aysan dhinacyada daacad ka aheyn sugida Amniga, waxaana ilaa hadda si weyn loogu foogan yahay sababaha loo qaban waayay kuwa dilalka qorsheysan fuliya ee mar kasta u baxsadaan.